मत्ती १६ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१६ अनि फरिसी र सदुकीहरू उहाँकहाँ आए र स्वर्गबाट एउटा चिन्ह देखाउनुहोस् भनेर उहाँको परीक्षा गर्न खोजे। २ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “[[जब साँझ पर्छ, तब तिमीहरू यसो भन्ने गर्छौ, ‘आकाश रातो छ; त्यसैले मौसम सफा हुनेछ।’ ३ अनि बिहान यसो भन्छौ, ‘आकाश रातो भए पनि धुम्म बादल लागेको छ; त्यसैले आज झरी परेर चिसो हुनेछ।’ तिमीहरू आकाश हेरेर त्यसको अर्थ लगाउन सक्छौ तर अहिले भइरहेको कुरा हेरेर त्यसको चाहिं अर्थ लगाउन सक्दैनौ।]]* ४ परमेश्वरप्रति वफादार नरहने दुष्ट पुस्ताले चिन्ह मात्र खोजिरहन्छ तर त्यसलाई योनाको चिन्हबाहेक अरू कुनै चिन्ह दिइनेछैन।” यति भनिसकेपछि तिनीहरूलाई त्यहीं छोडेर उहाँ जानुभयो। ५ तब चेलाहरू समुद्रको पारिपट्टि गए तर तिनीहरूले आफूसित रोटी लैजान बिर्से। ६ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूको आँखा खुल्ला राख अनि फरिसी र सदुकीहरूको खमिरदेखि होसियार रहो।” ७ त्यसैले तिनीहरू यसो भन्दै आपसमा कुरा गर्न थाले: “ओहो, हामीले त रोटी ल्याउन बिर्सेछौं नि!” ८ यो थाह पाएर येशूले भन्नुभयो: “ए थोरै विश्वास हुने मानिसहरू हो, आफूसित रोटी छैन भनेर तिमीहरू किन आपसमा कुरा गर्दैछौ? ९ के तिमीहरूले अहिलेसम्म कुरा बुझेनौ अनि पाँच वटा रोटीले पाँच हजार जनालाई खुवाउँदा तिमीहरूले कति डालो बटुलेका थियौ, बिर्स्यौ? १० अनि सात वटा रोटीले चार हजार जनालाई खुवाउँदा कति वटा ठूलो डालोमा बटुलेका थियौ, त्यो पनि बिर्स्यौ कि? ११ त्यसोभए, मैले तिमीहरूसित रोटीको विषयमा कुरा गरेको होइन भनेर तिमीहरू किन बुझ्दैनौ? मैले त फरिसी र सदुकीहरूको खमिरदेखि होसियार रहो भनेको पो हुँ।” १२ उहाँले रोटीमा हालिने खमिरबाट होइन तर फरिसी र सदुकीहरूको शिक्षाबाट होसियार रहो भन्नुभएको रहेछ भनेर बल्ल तिनीहरूले बुझे। १३ तब सिजरिया फिलिप्पीको भूभागमा पुगेपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्न थाल्नुभयो: “मानिसको छोरा को हो भनी मानिसहरू भन्दैछन्‌?” १४ तिनीहरूले भने: “कसैले बप्तिस्मा गराउने यूहन्ना, कसैले एलिया अनि कसै-कसैले चाहिं यर्मिया वा भविष्यवक्ताहरूमध्ये कोही एक जना हो भन्छन्‌।” १५ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “त्यसोभए, तिमीहरूचाहिं म को हुँ भन्छौ?” १६ सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए: “तपाईं जीवित परमेश्वरका छोरा, ख्रीष्ट* हुनुहुन्छ।” १७ येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “तिमी धन्यका हौ, हे योनाको छोरा सिमोन, किनकि यो कुरा तिमीलाई कुनै मानिसले प्रकट गरेको होइन तर स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबाले प्रकट गर्नुभएको हो। १८ अनि म तिमीलाई यो पनि भन्छु, तिमी पत्रुस हौ र म यस चट्टानमाथि आफ्नो मण्डली बनाउनेछु अनि चिहान* त्यसमाथि विजयी हुनेछैन। १९ म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु। तिमीले पृथ्वीमा जे बन्द गर्नेछौ,* त्यो स्वर्गमा बन्द गरिसकेको हुनेछ अनि तिमीले पृथ्वीमा जे खोल्नेछौ,* त्यो स्वर्गमा खोलिसकेको हुनेछ।” २० त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर कसैलाई नबताउनू भनी कडा आज्ञा दिनुभयो। २१ त्यस बेलादेखि उसो येशू ख्रीष्टले आफू यरूशलेममा जानु, धर्म-गुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूको हातबाट धेरै दुःख भोग्नु अनि मारिनु र तेस्रो दिनमा ब्यूँताइनु आवश्यक छ भनेर आफ्ना चेलाहरूलाई बताउन थाल्नुभयो। २२ यो सुनेर पत्रुसले उहाँलाई अलग्गै लगेर यसो भन्दै हप्काउन थाले: “प्रभु, आफ्नो विषयमा त्यस्तो अनिष्ट कुरा नगर्नुहोस्।* तपाईंलाई कुनै हालतमा यस्तो हुनेछैन।” २३ तब फनक्क फर्केर उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो: “ए सैतान, यहाँबाट गइहाल! तिमी मेरो लागि ठेस लाग्ने कारण रहेछौ, किनकि तिम्रो सोचाइ परमेश्वरको होइन तर मानिसहरूको हो।” २४ त्यसपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो यातनाको खम्बा* उठाओस् र निरन्तर मेरो पछि लागोस्। २५ किनकि जसले आफ्नो ज्यान* बचाउन चाहन्छ, उसले त्यो गुमाउनेछ तर जसले मेरो खातिर आफ्नो ज्यान गुमाउँछ, उसले त्यो पाउनेछ। २६ यदि कुनै मानिसले सारा संसार प्राप्त गर्छ तर त्यसको लागि उसले आफ्नो ज्यानै गुमाउँछ भने उसलाई के फाइदा हुन्छ र? अथवा मानिसले आफ्नो ज्यानको सट्टामा के दिन सक्छ? २७ किनकि मानिसको छोरा आफ्नो बुबाले दिनुभएको गौरवसहित आफ्ना स्वर्गदूतहरू लिएर आउने निश्‍चित छ; तब उसले हरेकलाई आ-आफ्नो कामअनुसारको प्रतिफल दिनेछ। २८ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यहाँ उभिरहेकाहरूमध्ये कोही-कोही यस्ता छन्‌, जसले मानिसको छोरालाई राजाको रूपमा आउँदै गरेको नदेखेसम्म कुनै हालतमा मृत्यु चाख्नेछैनन्‌।”
^ मत्ती १६:३ * दोहोरो कोष्ठक चिन्हभित्र भएको अंश कुनै-कुनै पुराना पाण्डुलिपिहरूबाट हटाइएको भए तापनि अरूमा भने पाइन्छ।
^ मत्ती १६:१६ * मत्ती १:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मत्ती १६:१८ * ग्रीकमा “हेडिज।” अतिरिक्त लेख ८ हेर्नुहोस्।
^ मत्ती १६:१९ * शाब्दिक, “बाँध्नेछौ।”
^ मत्ती १६:१९ * शाब्दिक, “फुकाउनेछौ।”
^ मत्ती १६:२२ * शाब्दिक, “आफूमाथि दया गर्नुहोस्।”
^ मत्ती १६:२४ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।
^ मत्ती १६:२५ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।